Laser Kucheka Kweaiti Kapeti yeiyo Aviation Maindasitiri - Goldenlaser
Pamusoro pezvo, iyo kapeti yekuvhiya yakanyanya kureba. Laser yekucheka ndiyo nzira iri nyore yekucheka kapeti yendege nemazvo uye nemazvo. Laser inonamira pamucheto wemagumbeze enhandare otomatiki, hapana chikonzero chekusona, chinokwanisa kucheka saizi yakareba nekureba kwazvo, kunze kwebasa uye nekuchinjika kwakanyanya kwezvibvumirano zvidiki nepakati.
Conveyor tafura mberi zvinhu kuti nokuveza tafura kwaita, hapana chikonzero Chinyorwa kupindira panguva nokuveza, achiponesa basa mari.
Nharaunda Rugs, Indoor Kapeti, Kunze Carpet, Doormat, Car Mat, Carpet Inlaying, Yoga Mat, Marine Mat, Ndege Kapeti, Floor Carpet, Logo Kapeti, Ndege Cover, EVA Mat, nezvimwewo.
Muenzaniso Nha .: CJG-2101100LD
Iyo yekucheka tafura upamhi ndeye 2.1 metres, uye iyo tafura kureba inopfuura 11 metres kureba. Neiyo X-Yakareba Tafura, iwe unogona kutema akanakisa marefu mapatani nepfuti imwe, hapana chikonzero chekucheka hafu yemapatani uye wozogadzirisa zvimwe zvese zvinhu. Nekudaro, hapana musiyano wekusona pane icho chidimbu chemuchina chinogadzirwa nemuchina uyu. Iyo X-Yakareba Tafura Dhizaini inogadzira izvo zvinhu chaizvo uye zvinobatika zvine shoma nguva yekudyisa.